काेरियाकाे थेगुमा भेटियाे काेराेनाकाे पछिल्लाे संक्रमण, सचेत रहन नेपाली डाक्टरकाे सुझाव
दक्षिण काेरियाकाे थेगुमा मंगलबार काेराेना भाईरसकाे पछिल्लाे १ जना संक्रमित भेटिएकाे छ । थेगुमा एक ६१ वर्षिया महिलामा भाईरसकाे संक्रमण भेटिएकाे काेरियाली डाक्टरहरकाे संस्था केसीडिसीले जनाएकाे छ ।याे सँगै काेरियामा काेराेना भाईरसबाट संक्रमित हुनेकाे संख्या ३१ पुगेकाे छ । मंगलबार सम्मकाे सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भाईरसबाट संक्रमित हुनेकाे संख्या ३१ पुगेका
काेरियाली संचार माध्यमले जनाएका छन् । यसैविच काेरियाका नेपाली डाक्टर राजेश चन्द्र जाेशीले संक्रमण काेरिया भरी नै फैलिएकाले सचेत रहन यहाँका नेपालीसँग आग्रह गरेका छन् ।काेरियामा मंगलवार सम्म ९ सय ५७ जना क्वारेन्टाईनमा रहेकाे जाेशीले बताए । चिनकाे बुहानबाट सुरु भएकाे उक्त भाईरसका कारण चिनमा मात्रै हाल सम्म १८०० ले ज्यान गुमाईसकेका छन । त्यस्तै ३ हजार १ सय १२ जनालाई पूर्ण रुपमा निकाे भएकाे चिन सरकारकाे भनाई छ ।खबर पेपरबाट
स्वाव संकलनपछि स्वास्थ्यकर्मीले इथानोलयुक्त ‘स्प्रे’ शरीरमा छर्के। पोसाक फेरेर भक्तपुर गएका स्वास्थ्यकर्मी साँझ काठमाडौं फर्किंदा खुसी देखिन्थे। डा. शाहले भने, ‘देश र पेसाप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्नु जोखिम नै थियो। सबै काम सकेर फर्कंदा खुसी लाग्यो। कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. महेश अधिकारी, मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट त्रिभुवनप्रसाद शाह, स्मृति श्रेष्ठ, विमलेश अधिकारी, सुनी डंगोल, स्विटी उपाध्याय, विनिता महर्जन, अबिना ओझा र अर्जुन चौधरी खटिएका थिए।
कोभिड–१९ संक्रमणपछि चीनबाट उद्धार गरी ल्याइएका नागरिकलाई भक्तपुर खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनीहरूलाई त्यहाँ कम्तीमा १४ दिनसम्म राखिनेछ।क्वारेन्टाइन अवधिभर नियमित स्वास्थ्य जाँच र शंकास्पद लक्षण देखिएमा प्रयोगशाला परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यसरी समय वर्वाद गरिरहनु भएको त छैन ?
कोरियाले शुरु गर्यो कामदारले पाउनु पर्ने ज्यालाको जानकारी तथा तुलना गर्न मिल्ने वेवसाइट